Ogaden News Agency (ONA) – Shan askari oo lagu dilay weerar ka dhacay Mandera.
Shan askari oo lagu dilay weerar ka dhacay Mandera.
Posted by Wariye Qaran	/ March 2, 2018
Koox hubeysan ayaa xalay weerartay saldhig ay leeyihiin ciidammo katirsan booliska dalka Kenya, kuwaa oo ku sugnaa tuulada Fino ee Mandera.
Weerarka oo dhacay gelinkii dambe ee xalay ayaa lagu dilay shan kamid ah ciidammada booliska ee halkaasi, waxaana sidookale weerarka lagu dhaawacay saddex kale oo katirsan isla booliska Fino.
Eric oronye oo ah guddomiye ku xigeenka ammaanka ee deegaanka Lafey oo aan sidaasi uga fogeyn Tuulada uu weerarka ka dhacay ayaa waxaa uu sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay jareen anteenadii isgaarsiinta ee tuulada Fino, waxaana uu intaa ku daray in isgaarsiinta la jaray ay keentay in booliska Mandera aysan ka warhelin weerarka.
Mr Oronye ayaa sidoo kale sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay ka badnaayeen konton qof, kuwaa oo lugeenayay.
Ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarka, balse ururka Alshabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro uga geystay deegaano hoostaga Mandera, waxaana kamid ah weeraradii dhowr sano kahor lagu qaaday shaqaale ka shaqeynayay goob laga qodo dhagaxa iyo macallimiin wax ka dhigayay Mandera.
Weerarkan ayaa imanaya laba toddobaad un kadib markii koox hubeysan ay weerar ku qaadeen macallimiin wax ka dhigayay deegaanka Qarsaa ee katirsan Wajeer, halkaa oo lagu dilay saddex macallin oo wax ka dhigayay iskoolkaasi, kuwaa oo kasoo jeeda qeybaha kale ee dalka Kenya, waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay hal macallin oo kale.